Nhau - WOCA Foramu 2020: Richard, mutungamiri weAshine, anopa hurukuro
WOCA Foramu 2020: Richard, mutungamiri weAshine, anopa hurukuro
Zvita 9, 2020
Nyika yeConcrete Asia Expo
13: 00-14: 00 B01 Salon Nzvimbo yeW3 Hall, VaRichard Deng, Mutungamiri weAshine Diamond Zvishandiso Co, Ltd. vakapa hurukuro pamusoro pe "Kushandiswa kweDhaimondi Zvishandiso paGayo Matombo uye Wear-isingagadzike Mahwindo" . Chekutanga, akabvunza vateereri kuti ndeapi matambudziko makuru uye mapoinzi ekurwadziwa akasangana nenyanzvi panzvimbo iyi mukukwirisa nekukorobha zvisina kujairika grindstone pasi nezvigadzirwa zvinokwikwidza? Ipapo akazivisa matanho ese enhanho uye zvakanakira iyo yepamusoro-soro-inoshanda yakazara mhinduro, uye inosuma zvakadzama mashandisiro anoita Ashine mhinduro dzakanyanya-dzakanyanya kune ese matambudziko makuru (kusanganisira kunetsekana mukuenzanisa uye kubvisa kukwenya, kupora kwakadzika uye kubwinya, nezvimwewo). VaRichard vakatora mapurojekiti chaiwo semienzaniso yekuverenga mitengo mina yekukuya madisc, mubhadharo wevashandi, fizi maneja weprojekiti, uye mubhadharo wekambani mukutora nekukora; uye mhedzisiro yacho inoratidza kuti kushandiswa kwepamusoro-soro super-inopenya yekugaya disc mhinduro kwete chete kunodzora zvakanyanya mutengo wese asi kunogona kuchengetedza yakawanda nguva, uye kupedzisa chirongwa pamberi. Mutungamiri Deng vakaongororawo mhinduro inoshamisa yeeppoxy yekugaya matombo epasi uye inoshamisa nhanho-nhatu yekukuya mhinduro yekupfeka isingagadziriswe yakaoma yakaoma. Inokurudzirwa zvakanyanya kuti uve nebhajeti yakazara musati chirongwa. Vanhu vazhinji vari pasi avo vanoda kudzidza vakaunganidzwa kusalon. Tinotarisira mikana yakawanda yekuchinjana mune ramangwana!
2020 WOCA yakaparura nyowani "Enterprise Kutaurirana Salon & Injiniya Exhibition Nzvimbo", iyo inotarisira kubatsira mhando dzemhando yepamusoro mumaindasitiri kugovera zvigadzirwa uye kugona kwehunyanzvi, nekusimudzira mhedzisiro yemakambani ekuratidzira; tenda WOCA nekupa chikuva chekugovana nekukurukura zvakasununguka.
Trapezoids Daimondi Kukuya Shangu, PCD Kukuya Shangu, Diamond Kwayedza Bhutsu, Simbi Yakasungwa Daimondi Kukuya Mavhiri, Concrete makorari Mapedhi, Concrete vachikuya Shoes,